तपाईँले मिठो मान्दै खाने पानीपुरीको बारेमा यी कुरा थाहा छ ? सबैले जानी राखौं - Mitho Khabar
June 27, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on तपाईँले मिठो मान्दै खाने पानीपुरीको बारेमा यी कुरा थाहा छ ? सबैले जानी राखौं
नेपालमा प्राय: युवतीहरूले धेरै रुचाउने गरेको खानेकुरा हो ‘पानी पुरी’। ‘पानी पुरी’ को स्वाद चाख्न विशेष गरी सडकमा युवतीहरूको लाइन नै लाग्ने गर्छ, त्यसमा युवाहरूको पनि कमी हुँदैन ।‘पानी पुरी’ नेपालमा मात्र होइन, साउथ एसियामै अत्यधिक रुचाइएको खानेकुरा हो। यसको टेस्ट विश्वभर नै रुचाइन्छ।
पानी पुरी कहाँबाट आयो ?:पानी पुरी भारतको मग क्षेत्रबाट सुरुवात भएको हो । यहाँको दक्षिणी भूभाग विहार को नामबाट चिन्ने गरिन्छ भने यसलाई फु’ल्की समेत भनेर भन्ने गरिन्छ । सर्वप्रथम यहीबाट पानी पुरी बनाइएको थियो ।
चिज एउटै, नाम फरक:पानी पुरी चर्चित हुँदै गएपछि विश्वभर यसलाई फरक फरक नामकरण पनि हुन पुग्यो। यसलाई कुनै ठाउँमा गोलगप्पाको नामबाट चिनिन्छ भने कहीँ ठाउँमा पानीपतासेको नामबाट ।
कतै पानीपुरीलाई खाली प’कौडाको नामबाट पनि चिनिन्छ भने कहीँ स्वादिष्ट चाट व्यञ्जनको नामबाट चिनिन्छ ।
पानी पुरी खाँदा मानिसको जिब्रोमा स्वादको मज्जा भरिइदिनुका साथै खाऊ खाऊ ला’ग्ने बानीको विकास समेत गरिदिन्छ ।पानीपुरलाई सही ढ’ङ्गबाट बनाएर खाएमा यसले शरीरलाई ए’सी डि’टीबाट राहत दिलाउँछ भने मु’डलाई फ्रेस बनाउँछ । एक अनुसन्धानले पानी पुरी पुरै क्यालोरी फुड भएको बताइएको छ।